Katara: Mahazo Alalana Hiantsena sy Hitondra Finday! · Global Voices teny Malagasy
Katara: Mahazo Alalana Hiantsena sy Hitondra Finday!
Voadika ny 05 Jona 2012 9:42 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Svenska, Français, русский, Ελληνικά, 繁體中文, 简体中文, English
Namaly am-pahatezerana ilay lahatsoratra nivoaka tao amin'ny tranonkalan'ny “Sydney Morning Herald” ireo mpijery aterineto any Katara izay milaza ny tsy nahazoan'ny vehivavy Katariana miantsena ary tsy mora ny fidiran'izy ireo amin'ny teknolojia.
Ilay lahatsoratra nivoaka tamin'ny 23 May ary nantsoina hoe “manampy ny vehivavy hifanerasera amin'izao tontolo izao ny fiaraha-misotro teknolojia”, izay milaza ny fahasarotan'ny vehivavy amin'ny firenena sasany amin'ny fahazoana mikirakira teknolojia.
Qatar no firenena voalohany voalaza; nanoratra ilay mpanao gazety Matthew Hall hoe:
Mety hiteraka faharatrana any amin'ny firenena sasany raha toa ka vehivavy ianao ny fihetsika tsotra araka ny hita toy ny mividy finday . Any Katara,ny lehilahy ao anatin'ny fianakaviana ihany matetika no azon'ny vehivavy ifampiresahana. Misy fetrany mazàna ny fandehanana miantsena. Izany no misoroka ny vehivavy tsy hisitraka ny fivoaran'ny teknolojia efa ianohan'ireo mitovy aminy any amin'ny toera-kafa. Ny vahaolana? fanatontosana lanonana karazandrazany “Tupperware”, tahaka ny an'ny Vodafone, izay ampiantranoan'ny vehivavy mpivarotra any an-tokantranom-behivavy manerana an'i Doha renivohitr'i Katara.
“Hita amin'ny fomba isan-karazany ny fanamby ara-kolontsaina” hoy i Ann Mei Chang, mpanolo-tsaina voalohany momba ny vehivavy sy ny teknolojia ao amin'ny departemantam-panjakana Amerikanina, sy mpiaro ny zon'ny vehivavy hahazo tombontsoa avy amin'ny fampiasana teknolojia. “Manahy ny vady, na anadahy, na ny ray fa ho ratsy fitondra-tena ny ny vehivavy sy ny zatovovavy ao amin'ny ankohonany raha afa-miditra anterineto na mampiasa finday. Izany no tsy amelan'izy ireo ho amin'izany na dia maro aza ny tombontsoa azo avy aminy.”
Tsenambarotra Villaggio, Doha, Qatar. Saripika mpisera Flickr Frédéric Gloor (CC BY-NC-SA 2.0) na tsy azo amidy sy tsy azo ovaina.
Ao amin’ny Blaogim-baovaon’i Doha, namaly ny lahatsoratry ny “Sydney Morning Herald” I Shabina Khatri. Nilaza izy hoe:
Ohatra farany mampalahelo mampiharihary ny fitantarana diso lazain'ny mpanao gazety momba an'i Katara, ampidirin'i Hall ho isan'ny firenena tsy mba misitraka ny fandrosoana ara-teknolojia ny vehivavy ao aminy noho ny fitazonan'ny lehilahy izany ho azy samirery. Ao amin'ny fizarana voalohany ihany no voatonona i Katara ao amin'ny lahatsoratra, satria miantso telefonina an-trano ireo vehivavy mpivarotra ho an'ny Vodafone. Fa diso tanteraka ny petrakevitra ambadika ireny fotoana ifampitafatafana vetivety ireny. […] Ny marimarina kokoa, mitsidika any an-tokantranom-behivavy ao Katara ny Vodafone, satria izay no metimety aminy kokoa, fa tsy noho izy ireo tsy afaka mivoaka hividy ny finday mahafinaritra iray (na roa, na telo). Voasoratra ho olana mila dinihina ao amin'ny ambin-dahatsoratra ny firenena voatonona mazava ho mamela irery ny vehivavy tsy hahazo hiditra raha eo amin'ny lafiny teknolojia. Fa vavolombelona izay rehetra efa nandany dimy minitra tany amin'ny tsenambarotra eto Katara – izay vao nanangana ny ligin'ny taranja basikety eo amin'ny vehivavy- fa tsy anatin'izany firenena izany izy.
Mifangaroharo ny fihetseham-po ka ao ny tsy finoana sy fandatsana avy amin'ireo mahatsiaro tohina.
Nanontany i Jennan:
@Dalla3ah: Fa vanim-potoana inona no eritreretin’izy ireo fa iainantsika amin’izao?!!!
Misiokantsera i VelvetinQatar:
@VelvetinQatar: Marina? Mamaky aho dia toy ny mahita hoe “Katara Katara? Toy ny Katara izay ipetrahako? Tena misy zavatra tsy hitako an!”
Nilaza I Sybil Knox hoe:
@SybnDoha: mampalahelo dia mampalahelo ny vehivavy Katariana… moa ve KILALAO ireny Blackberries mankeny amin'ny sofiny ireny? Mivoraka loatra ny saiko.
Nanampy izy hoe:
@SybnDoha: They [the Sydney Morning Herald] are in need of some serious “calling out”. ‪#ignorance
‬@SybnDoha: Mila “antso” matotra ry zareo [Sydney Morning Herald]. #tsyfahafantarana
Nilaza Sarah hoe:
@quizzy_mj: Mampihomehy. Tokony ho fantatr’izy ireo fa farafahakeliny manana Blackberry na iPhone iray isaky ny Katari tsirairay ary miantsena matetika.
Nandritra izany fotoana izany, naka sary an-tsaina ny amin’ny lohahevitra manaraka momba ny vehivavy Katariana i Vallatah
@Vallath: Farafaharatsiny aloha mba mamorona ry zareo. Inona ny manaraka: Aterineto natokana ho an'ny vehivavy irery any ao Katara.